मलाई खल्बल्याएर कहाँ हरायो त्यो हेन्डसम ?
शनिबार, २ बैशाख, २०७४
चैत लागे पनि जाडो हटेको थिएन । बिहानको समय चिया पसलमा चियाको चुस्किसँगै जाडोलाई भगाउने कोसिस गर्दै थिएँ ।
भर्खर झुल्किँदै गरेको घामले त्यो गोरो वर्णलाई चम्काएको थियो । उसको साथमै बसेको अर्काे मुहारमा पनि गोरो बनाउने अभियान घामले चलाइरहेको थियो । अन्यको मुहारमा पनि आफ्नै हिसाबले झुल्किँदै गरेको घामले वर्णअनुसार चमक दिँदै थियो ।
चिया ल्याउँदै थिए सानो भाइले । आफ्नो कपको चिया सकिए पनि फेरि अर्काे कप थप्ने अनुमति दिँदै थियो जाडोले । अर्को कप चिया अर्डर गरेँ ।
मेरो आँखा अगाडि रहेको उसको टेबलमा चिया आइसकेको थियो । चियासँगै हातका ३ औंलाको साहारामा अड्किएको चुरोटमा गएर मेरो नजर ठोक्कियो । चियासँगै चुरोट लिनुको औचित्य त म बुझ्न सक्दिनँ । तर चुरोट र चिया घनिष्ट मित्र हुन् जस्तो मलाई लाग्थ्यो । कोही पनि मानिस चुरोट तान्दै गर्दा चिया या चिसो पनि सँगै लिने गर्छन् । चियामा पनि निकोटिनको मात्रा बढी हुन्छ र चुरोटमा पनि । सायद चियालाई ब्वाईफ्रेन्ड र चुरोटलाई गर्लफ्रेन्ड या भाईस–भर्सा सम्झिन्छन् कि !
चुरोटको धुँवा र चियाको बाफसँग उनीहरु आफ्ना गफ पनि त्यसरी नै उडाइरहेका थिए । एकले अर्काेलाई उडाउँदै नजर म भएको टेबलतिर लगाउँदै थिए । एक्ली केटी देखेर जिस्काउँदै थिए केटाहरु ।
बाटोमा एक्लै हिँड्दा होस या कहीँकतै खाजा घरमा बस्दा जिस्काउने साधन बन्छन् केटीहरु । कहिले बाटोमा हिँड्दै गर्दा जिब्रो पडकाउँछन्, कहिले बाइकको चापीले खुट्टामा हिर्काउँछन्, कत्तिलाई केटी देखेपछि खोकी लाग्छ । हातमा आइफोन लिएर जतिसुकै आधुनिक बने पनि केटी जिस्काउने पुरातनवादी सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
झोलाबाट मोबाइल निकालेर कानमा एअरफोन घुसारेँ । गीत बजे पनि सुनिरहेकी थिएँ, उनीहरुका गफ । गीत बन्द गरेर कानमा एअरफोन मात्र घुसारेको बाहाना गरेँ अनि सुनिरहेँ एकछिन्सम्म गफ ।
ती चिया पसलका साहुजीलाई कति अल्छी लाग्दो हो अल्लारे बँैसका ठिटाहरुको गफ सुनेर ! हुन त कहिलेकाहीँ मज्जा पनि लाग्दो हो । उनीहरुका गफले आफ्नो जवानी याद गर्दा हुन् साहुजी ।
एकाएक आ–आफ्नो पोल खोल्दै थिए, ‘साला हिजो राति मज्जा गरिरहेको बेला तलाई गर्लफ्रेन्डकोमा जानुपर्ने । अर्काेले भन्दै थियो ‘तँ नि तँ ! विदेशमा भएकी गर्लफ्रेन्डसँग दाम्लो बाँधेको बाख्राजस्तै झुन्डिराथिस् ।’ अर्को बोल्यो, ‘बाख्रा होईन साला बोका जस्तो भन् न’ । ‘बिल्ला नगरो न यार, कहिलेकाहीँ रमाइलो त गर्नै पर्यो नि ।’ एकले अर्कोको खेदो खन्दै थिए ।
एकटकले कुरा सुनिरहेकी थिएँ, गफ । चियाको कप रित्तिएको पनि पत्तो नभएछ ।
‘बबाल थिइ नि यार हिजो बाटोमा भेटीएकी केटी । धन्नै झापड खाइनस् । खुब जिस्काउने भाथिस् नि । लौ यो उमेरमा केटी नजिस्काए के बुढेसकालमा जिस्काउनु ।’ यस्तै यस्तै कुरा गर्दै थिए ।
मेरो नजर भने त्यही चुरोट तान्दै गरेको हेन्डसममा अड्किएको थियो । भगवानले पनि निकै लामो समय लगाएर बनाएका होलान् । गोरो वर्ण, मुहारमा केही दाग नभएको, दाह्रीजुङ्गा सर्लक्क काटेको । कालो ज्याकेटले असाध्यै सुहाएको थियो ।
उठेर ‘आइ लभ यु भन्दिउ कि’ जस्तै लाग्याथ्यो । तर मोराको पोल खोलीहाले साथीहरुले । फेरि उसका सबै साथीहरुको अगाडि बोल्ने आँट नै कहाँ आउथ्यो र ! भन्न त खाली पोष्टमा पनि के गोल हान्नु र गोल किप्पर भएकै ठाउँमा हान्ने हो भन्छन् । तर त्यो भनाइमा मात्र सीमित हो जस्तो लाग्छ । कम बोल्ने खालको रहेछ मोरो । उसको आवाज कम नै सुनिन्थ्यो ।
नबोलेरै राम्रो लाग्छ केही मानिस । कोही धेरै बोलेर रिस उठ्छ । कुन बेलामा कसलाई मन पराउँछ यो मन पत्तै हुँदैन । कहिले एकाबिहानै मनपर्छ कोही, कहिले दिउँसो त कहिले साँझमा । मन पराउनु र समयको के नै सम्बन्ध रह्यो र ! जुन समयमा जतिबेला जो पनि राम्रो लाग्न सक्छ ।
छड्के नजरले उसलाई नै हेरिरहेकी थिएँ । तर उ भने मोबाइलमा ब्यस्त थियो । एकपटक हेर्यो भने ‘हाई...’सम्म भन्छु भन्ने सोचेकी थिएँ । तर म जाने बेला भइसक्यो उसले हेर्दै हेरेन । साहुजीलाई चियाको पैसा तिरेर निस्किएँ । भोलिपल्ट पनि त्यहीं समयमा चिया खान पसलमा पुगेँ । उसका ग्याङ भने आएनन् ।
तेस्रो दिन पनि गएँ । सबैजना आए तर उ आएन । सोध्ने आँट गरिनँ । भोलि आउँला नि भन्ने लाग्यो । तर ५ दिनसम्म लगातार जाँदा पनि उ आएन ।
पसलका साहुजीसँग नसोधी बस्न सकिनँ । उसको वर्णको बयान गर्दै सोधेँ । साहुजीले भने, ‘को त्यो चुरोट पिउने सरोज ? त्यो त बिदेश गहिसक्यो ।’ अन्तिम दिनमा किन देखेँ होला उसलाई । टेबलमा बसेर चुरोट तानिरहेको उसको मुहारको याद आयो । मनले मन पराएको उ विदेश पो पुगिसकेछ । म जस्तै कति अभागी होलान् मन परेको मान्छेलाई ‘आइ लाइक यू’ भन्न नपाउँदै विदेश होमिएका ।’
सायद धेरै होलान्, धेरै नेपालीहरु ।